साम्राज्ञीविरुद्ध भुवन केसीद्धारा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता ! « MNTVONLINE.COM
साम्राज्ञीविरुद्ध भुवन केसीद्धारा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता !
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्‍मी शाहविरुद्ध अभिनेता भुवन केसीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । केसीले शुक्रवार शाहविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । मुद्दा दर्ता भएको छ, अब कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले भने ।
यता सामाग्रीकी आमा नेहा राज्यलक्ष्मी शाहले भने आफूहरुलाई मुद्दाबारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताइन् । अभिनेता केसीले यसअघि चलचित्र कलाकार संघमा सामाज्ञ्रीले आफूमाथि झुटो आरोप लगाएको भन्दै छानविन गरिदिन उजुरी दिएका थिए । भुवनले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै साम्राज्ञीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप लगाएकी थिइन् । यी दुबैबीच पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा दोहोरी नै चलेको थियो ।